Mpanamboatra milina mpanamboatra Meixin
Ny orinasantsika dia orinasa orinasa miorina amin'ny 2004.Wa manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana ary ny famokarana milina famoronana boribory 2-5 axis (doble) miloko, milina fanodinana sy milina CNC, milina fisotroana kapila indroa loha CNC. milina fanamboarana nify, milina fanendahana boribory, borosy fanapahana ary milina trimming, sns.
<$ , indostrian'ny fanamboarana solika elektrika sns. Azontsika atao ny manao ny milina araka ny takian'ny mpanjifa.
Manana vondrona fampandrosoana teknolojia matihanina sy manana traikefa izahay. Vonona ny hamolavola sy hamokatra vokatra miaraka amin'ny fenitra manokana sy namboarina manokana. Ankehitriny, manana teknolojia fanodinana milina famoronana milina isika, fahaiza-manao famoronana matanjaka, ary manatsara ny rafitra serivisy izahay.